Ogaden News Agency (ONA) – Sanad Guradii 33 aad ee ONLF iyo Minneapolis oo ay Cawa wacdaro ka dheceen
Sanad Guradii 33 aad ee ONLF iyo Minneapolis oo ay Cawa wacdaro ka dheceen
Posted by ONA Admin	/ August 27, 2017
Cawa oo ah haben Sabti ah waxaa magalada Minneapolis ka qabsontay Munasabad lagu mamusayay sanadguradii 33 ee kaso waregtay asaski Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya.
Munasabadan oo si hersara ah loso agasimay ayaa waxaa madasha soo buxdhafiyay tagerayasha ururka ONLF oo habenkani cawa ah mujiyay cududodi halgan, dhanka kalana farxadoda halgan la wadagayay walalohoda ay howsha halganka kuwada jiran.
Munasabadan qaybtii 1 aad, waxay ahayd khudbado ay so jediyeen masuliyinta gudiga fulinta ee jabhada ONLF, Odayada, aqonyahanka, siyasiyinta culumo awdinka iyo dhamanba qaybaha bulashada e kala duwan.
Dhanka kale waxaa xaflada lagu marti qaday o ka so qaybgalay, wafdi ka socota Jaliyada Oromia, Jaliyada Gambela. Waxa xusid mudan o madasha gobjog ka ahaa, Siyasi maraykan ah oo u tartamayay kursiga duqa magalada ee Minneapolis.
QaybtI 2 aad ee muanabada sanad gurada JWXO waxaa ay ahay fanka iyo suganta, waxana gobta ku sugnaa Fananin can ah iyo dhalinta Ogadenia ee sida aadka ah u taqana suganta hidaha iyo dhaqanka ah ee ay Ogadenya canka kutahay, sida Dhantada.
Xafladi sanadgurada ahayd ee cawa kadhacday Mineapolis, ayaa ahayd, mid tarikhi ah oo ay bulshadu kudirsatay.